Lista maimaim-poana ho an'ny fiarovana ara-tsakafo - BALLYA
Ahoana ny fitanisana ny orinasanao amin'ny Directory Security Directory?
Mandra-pahoviana no havoaka aorian'ny fandefasana azy?
Hamoaka ve ny fandefasana rehetra?
Inona no fampahalalana ilaina?
Sokajy Entry Directory
Ny BALLYA Food Security Directory dia mitanisa ny orinasa izay misy ny vokatra sy ny serivisy mifandraika amin'ny safey sakafo amin'ny rojom-pamokarana manontolo, manomboka amin'ny akora hatramin'ny vokatra farany. Ny orinasa sy ny orinasa rehetra mifandraika amin'izany dia raisina an-tanan-droa ao amin'ny lisitry ny fiarovana ny sakafo. Ireo mpamaky antsika dia afaka mikaroka ny lahatahiry isaky ny sokajy na amin'ny anaran'ny orinasa.
Mifandraisa amin'ny mpampanonta anay amin'ny alàlan'ny mailaka: info@ballyabio.cn
Ny mpampanonta anay dia hanamarina ny mombamomba ny orinasanao ao anatin'ny herinandro, raha toa ka marina ny zavatra rehetra, dia havoaka ao anatin'ny 1-4 herinandro.
Tsia, tsy hanome toky izahay fa tsy maintsy tanisaina ny mombamomba ny orinasanao. Ny fanekena rehetra dia tsy maintsy eken'ny mpampanonta alohan'ny lisitra. Ny fanolorana rehetra dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny politikantsika, raha tsy izany dia hesorina izany.
1. Anaran'ny orinasa
3. Fampidirana fohy momba ny orinasanao (ao anatin'ny teny 300)
4. Adiresy, tel, tranonkala
5. Famaritana ny vokatra
Lavinay ny tranokala spammy!
Mpanolo-tsaina momba ny haitao
Fitaovana fanodinana sakafo
Fitaovana any amin'ny laboratoara / fitaovana any amin'ny laboratoara
Serivisy fitiliana laboratoara